Mourinho Oo Todobo Xiddig La Imaanaya Man Utd, Arsenal Oo Daafac Kala Soo Wareegeysa Bayern & Wararkii Kale Ee Ay Qoreen Wargeysyada Maanta Oo Isniin Ah. | Haqabtire News
Mourinho Oo Todobo Xiddig La Imaanaya Man Utd, Arsenal Oo Daafac Kala Soo Wareegeysa Bayern & Wararkii Kale Ee Ay Qoreen Wargeysyada Maanta Oo Isniin Ah.
May 23, 2016 - Written by Sports Staff
Maalin wanaagsan meel walba oo joogtaan akhristayaasheena sharafta leh, waxaan idiin soo gudbineynaa sida aad inooga barateen maalin walba wararkii ugu waa weyn ee ay qoreen wargesyayda maanta oo Isniin ah, xuquuqda iyo sugnaanshaha wararkaan waxaa ka mas’uul ah wargeysyada magacooda uu ku hor xusan yahay.
Weeraryahanka PSG Zlatan Ibrahimovic ayaa Manchester United ugu soo biiraya xagaagan isagoo caawiye tababare u noqonaya Jose Mourinho islamarkaana qeyb ka ahaanaya xiddigaha kooxda. (Daily Express)
Caawiyaha tababare ee Man United Ryan Giggs ayaa iska diiday dalab shaqo oo uga yimid Mourinho, waxaana uu soo gabagabeynayaan 29 sannadood uu joogay Manchester United. (The Sun)
Mourinho 4 milyan ginni ka helay Manchester United si uusan u qabanin shaqo meel kale ah, laakiin ma uusan aqbalin sharuud habdhaqankiisa ku saabsan oo lagu dari lahaa heshiiskiisa shanta sanno. (Daily Mail)
Gudoomiye ku xigeenka maamulka guud ee Man United Ed Woodward ayaa siin doona Mourinho 200 milyan ginno uu qarashgareeyo, iyadoo tababaraha reer Portugal uu durbaba u arko saxiixiisa ugu horeeya Zlatan Ibrahimovic. (Daily Star)
Xiddigaha Mourinho diirada u saaran waxaa ka mid ah daafaca 21 jirka Everton John Stones, xiddigaha khadka dhexe ee reer Portugal Andre Gomes oo 22 jir ah iyo Joao Mario oo 23 sanno jir ah, weeraryahanada Juventus iyo Inter Milan Alvaro Morata iyo Mauro Icardi iyo sidoo kale 29 jirka reer Argentina Ezequiel Garay. (The Guardian)
Everton ayaa kala hadashay tababarihii hore ee Manchester City Manuel Pellegrini inuu noqdo tababarahooda cusub xilli ciyaareedka danbe. (Daily Mail)
Kooxaha Manchester City iyo Borussia Dortmund ayaa ka heshiiyay saxiixa 25 jirka Jarmalka Ilkay Gundogan. (Goal)
City ayaa marka hore ka bixin doonta xiddiga khadka dhexe 20.1 milyan ginni, iyadoo ku dari doonta 1.5 milyan ginni haddii uu Gundogan wacdarro u dhigo kooxda Pep Guardiola. (Daily Telegraph)
Labada kooxood ee Man United iyo Chelsea ayaa seegi doona saxiixa weeraryahanka Napoli Gonzalo Higuain iyadoo 28 jirkaan uu wadahadalo kula jiro kooxda PSG. (The Sun)
Manchester United ayaa seegi doona saxiixa xiddiga garabka ka ciyaara ee kooxda Benfica Nicolas Gaitan oo 28 sanno jir ah, kaasoo ku biiraya kooxda finalka ka joogta Champions League ee Atletico Madrid. (Daily Express)
Kooxda Old Trafford ka dhisan ayaa sidoo kale tartan kala kulmeysa Barcelona oo ku aadan saxiixa daafaca kooxda PSG Marquinhos. (The Sun)
Arsenal ayaa wadahadalo la bilowday kooxda Bayern Munich iyagoo doonaya daafaca reer Morocco 29 sanno jirka Mehdi Benatia. (Daily Star)
Macalinkii hore ee Man United iyo Everton David Moyes ayaa wadahadalo kula jira Aston Villa isagoo ka fiirsanaya inuu ku laabto heerka labaad oo uu tababare ka soo noqdo mar kale. (Daily Telegraph)
Juventus ayaa ugu cadcad saxiixa xiddiga Chelsea diirada u saaran Miralem Pjanic, laakiin 26 jirka khadka dhexe ee Roma ayaa ka tagi kara Serie A iyadoo ay sidoo kale xiiseynayaan Barcelona & Bayern Munich. (Gazzetta dello Sport)
Kooxda Inter Milan ayaa diyaar u ah inay koox Premier League ah xagaagan ka iibiso 23 jirka reer Croatia Marcelo Brozovic. (Gazzetta dello Sport)
Tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa dib u soo cusbooneysiiyay xiisaha uu u ahyaa weeraryahanka reer Argentian 17 sanno jirka Maxi Romero laakiin waxa weli diirada koowaad u ah weeraryahanka Juventus Alvaro Morata. (Daily Mirror)